Be Fitiavana sy Tsara Fanahy ary Manam-pahendrena i Jehovah ka Tahafo
Inona avy no porofo fa nanahaka ny toetran’i Jehovah i Jesosy?
Inona no azontsika atao mba hanahafana ny toetran’i Jehovah, anisan’izany ny fitiavana?
Nahoana isika no mila mitandrina an’izay zavatra saintsainintsika?
1. Inona no fahaizana manampy antsika hanahaka an’i Jehovah?
NATAON’I Jehovah afaka mahatsapa an’izay mahazo ny hafa isika. Misy zavatra mbola tsy niainantsika, ohatra, nefa azontsika alaina sary an-tsaina. (Vakio ny Efesianina 5:1, 2.) Nahoana no manampy antsika hanahaka an’i Jehovah io fahaizana io? Inona no tokony hataontsika mba tsy hisy vokany ratsy eo amintsika izy io?
2. Inona no tsapan’i Jehovah rehefa mijaly isika?
2 Faly isika satria mampanantena fiainana mandrakizay ho an’izay tsy mivadika aminy i Jehovah. Ho any an-danitra ny voahosotra ary ho eto an-tany ny “ondry hafa.” (Jaona 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53) Samy tsy hijaly intsony na ireo ho any an-danitra na ireo hiaina mandrakizay eto an-tany. Mbola mijaly anefa isika izao, ary fantatr’i Jehovah ny fahoriantsika. Nahatsapa ny fahorian’ny Israelita tany Ejipta mantsy izy. “Ory izy nandritra ny fahoriana rehetra nanjo an’ireo.” (Isaia 63:9) Tsy navelan’ny fahavalony hanorina indray ny tempoly ny Israelita, taonjato maro taorian’izay, ka natahotra. Hoy anefa i Jehovah: “Izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasoko.” (Zak. 2:8) Tia ny vahoakany i Jehovah ka manampy azy ireo, toy ny reny mangoraka ny zanany kely. (Isaia 49:15) Azo lazaina hoe mahatsapa an’izay manjo ny hafa i Jehovah, ary nataony toy izany koa isika.—Sal. 103:13, 14.
NIEZAKA NY HO BE FITIAVANA TOA AN’I JEHOVAH I JESOSY
3. Inona no porofo fa nahay nangoraka i Jesosy?
3 Nahatsapa ny fahorian’ny hafa i Jesosy, na dia mbola tsy niainany mihitsy aza ilay izy. Natahoran’ny sarambabem-bahoaka, ohatra, ny mpitondra fivavahana satria namitaka azy ireo sady namorona lalàna be dia be. (Mat. 23:4; Mar. 7:1-5; Jaona 7:13) Mbola tsy natahotra na voafitaka mihitsy i Jesosy, nefa azony an-tsaina na ny zavatra mbola tsy niainany aza. “Nangoraka” àry izy “nony nahita ny vahoaka, satria nampahorina sady naparitaka toy ny ondry tsy misy mpiandry ireo.” (Mat. 9:36) Be fitiavana sy nangoraka toy ny Rainy izy.—Sal. 103:8.
4. Inona no nataon’i Jesosy rehefa nahita ny fahorian’ny hafa?
4 Tia olona i Jesosy ka nampiany izay nijaly. Hita hoe nanahaka tanteraka ny Rainy izy. Avy nitory tany amin’ny tanàna maro, ohatra, izy sy ny mpianany, indray mandeha, ary saika hiala sasatra tany amin’ny toerana mangina. Nisy vahoaka niandry azy anefa ka nangoraka azy ireo izy ary “nampianatra azy zavatra maro.”—Mar. 6:30, 31, 34.
5, 6. Inona no hanampy antsika ho be fitiavana toa an’i Jehovah? Hazavao amin’ny ohatra. (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
5 Inona no tokony hataontsika raha te ho be fitiavana toa an’i Jehovah isika? Eritrereto izao: Tsikaritry ny rahalahy tanora iray atao hoe Alain fa tsy mahita tsara ny rahalahy zokiolona iray ka sahirana rehefa mamaky teny. Sahirana koa izy rehefa mitory isan-trano. Tadidin’i Alain ilay tenin’i Jesosy hoe: “Izay tianareo hataon’ny olona aminareo no ataovy aminy koa.” (Lioka 6:31) Mieritreritra àry izy hoe: ‘Inona izao no mba tiako hataon’ny olona amiko?’ Izao avy eo no tonga ao an-tsainy: ‘Tiako raha miara-milalao baolina amiko ny olona.’ Tsy ho afaka hiara-milalao baolina aminy anefa ilay zokiolona. Inona àry no tian’i Jesosy holazaina? Tiany hieritreritra isika hoe: ‘Inona no tiako hataon’ny olona amiko raha mahazo ahy ny zavatra manjo azy?’
6 Mbola tanora i Alain nefa afaka maka sary an-tsaina ny zavatra manjo ny zokiolona. Mandinika an’ilay zokiolona izy, ary mihaino tsara azy, ka azony tsikelikely ny manjo azy. Tsapany hoe mafy aminy ny mamaky Baiboly sy ny mitory isan-trano. Hitany àry hoe inona no ilain’ilay rahalahy, ary te hanampy azy izy. Afaka manahaka an’i Alain koa isika. Tsy maintsy miezaka maka sary an-tsaina an’izay manjo ny hafa isika raha te ho be fitiavana toa an’i Jehovah.—1 Kor. 12:26.
Miezaha ho be fitiavana toa an’i Jehovah (Fehintsoratra 7)
7. Inona no tokony hataontsika raha tena te hahatakatra ny mahazo ny hafa isika?
7 Sarotra indraindray ny mahatakatra ny manjo ny hafa. Mbola tsy nanjo antsika mihitsy mantsy ny olana zakain’ny olona maro. Misy, ohatra, manaintaina be satria maratra na marary na mihantitra. Ny hafa indray ory satria kivy be na mora mitebiteby be na nisy nampijaly taloha. Misy indray tsy mitovy fivavahana aminy ny ao an-tranony. Ny hafa kosa ray na reny tokan-tena. Samy manana ny olana mahazo azy ny tsirairay, ary matetika izany olana izany no mbola tsy nanjo antsika. Inona àry no hanampy antsika ho be fitiavana toa an’i Jehovah? Mila mihaino tsara an’ilay olona isika, ary miezaka hahatakatra ny mahazo azy, na dia tsy ho azontsika tanteraka aza izany. Ho lasa be fitiavana toa an’i Jehovah isika amin’izay ka hanampy an’ilay olona. Samy hafa ny zavatra ilain’ny olona, nefa mety ho afaka hampahery azy isika na hanao zavatra ho azy.—Vakio ny Romanina 12:15; 1 Petera 3:8.
8. Inona no nanampy an’i Jesosy ho tsara fanahy?
8 Hoy i Jesosy: ‘Tsara fanahy amin’izay tsy mankasitraka sy amin’ny ratsy fanahy ny Avo Indrindra.’ (Lioka 6:35) Tsara fanahy toa an’i Jehovah i Jesosy. Inona no nanampy azy ho tsara fanahy? Noeritreretiny mialoha izay ho vokatry ny teniny sy ny ataony. Nanatona azy, ohatra, ny vehivavy iray nalaza ho mpanota. Nitomany izy io ka kotsan’ny ranomasony ny tongotr’i Jesosy. Hitan’i Jesosy hoe nibebaka izy. Azony an-tsaina àry fa halahelo be ilay vehivavy raha roahiny, ka nidera azy sy namela ny helony izy. Sosotra ny Fariseo iray rehefa nahita izany, nefa tsara fanahy taminy koa i Jesosy.—Lioka 7:36-48.
9. Inona no hanampy antsika ho tsara fanahy toa an’i Jehovah? Manomeza ohatra.
9 Inona no azontsika atao mba ho tsara fanahy toa an’i Jehovah isika? Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy tokony hiady ny mpanompon’ny Tompo, fa halemy fanahy [na “hahay handanjalanja”, f.a.p.] amin’ny rehetra kosa.” (2 Tim. 2:24) Fantatry ny olona mahay mandanjalanja hoe inona no tokony hatao mba tsy hampalahelo ny hafa, rehefa misy olana. Eritrereto ireto: Inona no hataonao raha tsy manao tsara ny asany ny mpampiasa anao? Inona no holazainao amin’ny rahalahy iray efa tsy nivory ela be nefa nivory indray? Ho tsara fanahy ve ianao eny am-pitoriana raha misy miteny aminao hoe: “Mbola sahirana be aho izao”? Hasiaka amin’ny vadinao ve ianao raha manontany anao izy hoe: “Naninona no tsy noteneninao mialoha hoe hisy zavatra hataonao amin’ny asabotsy?” Mila mieritreritra mialoha àry isika hoe inona no mety ho vokatry ny tenintsika. Ho hita amin’ny tenintsika sy ny ataontsika amin’izay fa tsara fanahy toa an’i Jehovah isika.—Vakio ny Ohabolana 15:28.
10, 11. Inona no hanampy antsika hanam-pahendrena toa an’i Jehovah? Manomeza ohatra.
10 I Jehovah no manam-pahendrena indrindra. Azony atao ny mamantatra mialoha hoe inona no ho vokany raha atao ny zavatra iray. Afaka ny hanam-pahendrena koa isika, na dia tsy mahay mamantatra ny hoavy aza. Azontsika saintsainina mialoha mantsy ny mety ho vokatry ny zavatra tiantsika hatao. Tsy noeritreretin’ny Israelita hoe inona no ho vokany raha tsy mankatò an’i Jehovah izy. Efa fantatr’i Mosesy fa hanao ratsy izy ireo, na dia nanao soa be dia be taminy aza i Jehovah. Nanao an’ity hira ity teo anatrehan’izy rehetra àry i Mosesy: “Firenena tsy mieritreritra ny Israely sady tsy misaina. Raha mba hendry mantsy izy ireo, dia ho nisaintsaina momba izany, ka ho nieritreritra izay hiafarany aorian’izay.”—Deot. 31:29, 30; 32:28, 29.
11 Mila maka sary an-tsaina an’izay ho vokatry ny ataontsika àry isika, raha te hanam-pahendrena toa an’i Jehovah. Misy olona miaraka aminao ve, ohatra, ary mieritreritra ny hivady ianareo? Tadidio fa mahery ny faniriana hanao firaisana. Aza mitady hanao zavatra mety handrava ny fifandraisanareo amin’i Jehovah mihitsy! Araho kosa ity torohevitry ny Baiboly ity: “Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa.”—Ohab. 22:3.
AZA MISAINTSAINA ZAVA-DRATSY
12. Nahoana no mety hanimba antsika ny zavatra eritreretintsika?
12 Fantatry ny olona malina fa toy ny afo ny eritreritra. Mahasoa ny afo raha ampiasaina tsara, ohatra hoe andrahoana sakafo. Mampidi-doza kosa izy io raha tsy voafehy satria mandoro trano ary mety hahafaty. Toy izany koa ny eritreritra. Mahasoa izy io raha manampy antsika hanahaka an’i Jehovah. Mampidi-doza kosa ny eritreri-dratsy. Raha zatra mieritreritra zavatra vetaveta na zava-dratsy hafa, ohatra, isika, dia mety ho voatarika hanao an’ilay izy. Manimba ny fifandraisana amin’i Jehovah tokoa ny manonofinofy zava-dratsy!—Vakio ny Jakoba 1:14, 15.
13. Inona no noeritreretin’i Eva hoe mety hahafinaritra?
13 Diniho izay nitranga tamin’i Eva. Lasa te hihinana ny voan’ilay “hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy” izy nefa efa tsy navela hanao izany. (Gen. 2:16, 17) Hoy ilay menarana taminy: “Tsy ho faty velively ianareo. Fa fantatr’Andriamanitra fa amin’ny andro hihinananareo azy io, dia hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy.” Hitan’i Eva fa “mahate hihinana ilay hazo sady mahafinaritra ny maso.” Inona àry no nataony? “Nakany ny voany ka nohaniny. Avy eo dia nomeny koa ny vadiny rehefa tafaraka taminy, ary dia nihinana izy.” (Gen. 3:1-6) Rehefa avy nihaino an’i Satana i Eva, dia nieritreritra fa toa hahafinaritra tokoa ny fiainana raha tsy misy miteny azy hoe izao no tsara na ratsy fa izy ihany no manapa-kevitra momba izany. Nampidi-doza anefa ilay eritreriny. Lasa nanota koa mantsy i Adama, ka ‘niditra tamin’izao tontolo izao ny ota, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana.’—Rom. 5:12.
14. Inona no lazain’ny Baiboly mba hanampiana antsika tsy hijangajanga?
14 Marina fa tsy fijangajangana ilay fahotan’i Eva. Nampitandrina anefa i Jesosy fa tsy mety ny manonofinofy manao zavatra vetaveta. Hoy izy: “Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” (Mat. 5:28) Hoy koa i Paoly: “Aza manao tetika hanomezana fahafaham-po ny fanirian’ny nofo.”—Rom. 13:14.
15. Inona no harena tokony hangonintsika, ary nahoana?
15 Tena ratsy koa raha variana mieritreritra ny ho lasa mpanankarena isika, ka tsy mifantoka amin’ny fanompoana an’i Jehovah. Mihevitra ny mpanankarena fa “manda fiarovana” ny harenany, nefa tsy marina izany. (Ohab. 18:11) Noresahin’i Jesosy tamin’ny fanoharana iray fa tsy misaina ny olona “mihary harena ho an’ny tenany, nefa tsy mba manankarena eo imason’Andriamanitra.” (Lioka 12:16-21) Faly kosa i Jehovah rehefa manao zavatra mahafaly azy isika. (Ohab. 27:11) Tena faly koa isika satria mankasitraka antsika izy, noho isika ‘manangona harena any an-danitra.’ (Mat. 6:20) Ny fifandraisana amin’i Jehovah mantsy no harena sarobidy indrindra azontsika ananana.
AZA MANAHY BE LOATRA
16. Inona no hanampy antsika tsy hanahy be loatra?
16 Mety hanahy be loatra isika raha miezaka manangona ‘harena etỳ an-tany.’ (Mat. 6:19) Nolazain’i Jesosy tao amin’ny fanoharana iray fa ‘mety hangeja ny teny momba ilay fanjakana ny fanahiana eto amin’ity tontolo ity sy ny famitahan’ny harena.’ (Mat. 13:18, 19, 22) Tsy ny vola ihany anefa no mety hampanahy. Misy koa mitebiteby lava hoe inona no mety hanjo azy. Mety harary anefa isika na lasa tsy hatoky an’i Jehovah intsony, raha manahy tafahoatra. Aoka kosa isika hatoky azy sy hitadidy fa “ny tebiteby ao am-pon’ny olona no mahakivy ny fony, fa ny teny soa kosa no mahafaly ny fony.” (Ohab. 12:25) Falifaly isika rehefa misy mpanompon’i Jehovah mahatakatra an’izay mahazo antsika ka mampahery antsika. Resaho amin’ny ray aman-dreninao, na ny vadinao, na ny namana atokisanao àry izay mampitebiteby anao, dia ho maivamaivana ianao.
17. Ahoana no anampian’i Jehovah antsika rehefa manahy isika?
17 I Jehovah no tena mahatakatra an’izay mampanahy antsika. Hoy i Paoly: “Aza manahy na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana mbamin’ny fisaorana. Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra no hiambina ny fonareo sy ny sainareo amin’ny alalan’i Kristy Jesosy.” (Fil. 4:6, 7) Rehefa manahy àry ianao, dia tadidio fa afaka manampy anao hifandray aminy foana i Jehovah. Ampiasainy hanao izany ny mpiara-manompo aminao, ny anti-panahy, ny mpanompo mendri-pitokisana, ny anjely, ary Jesosy.
18. Nahoana no ilaina ny maka sary an-tsaina?
18 Hitantsika tato fa tena ilaina ny maka sary an-tsaina, satria manampy antsika hanahaka ny toetran’i Jehovah, toy ny fitiavana. (1 Tim. 1:11; 1 Jaona 4:8) Ho faly isika raha tena tia olona sy mieritreritra ny ho vokatry ny ataontsika ary miezaka ny tsy hanahy be loatra. Miezaha àry haka sary an-tsaina ny fiainana ao amin’ny tontolo vaovao. Saintsaino koa hoe inona avy no azonao atao mba ho be fitiavana, ho tsara fanahy, hanam-pahendrena, ary ho falifaly toa an’i Jehovah ianao.—Rom. 12:12.
Hizara Hizara Tahafo Ilay Nampanantena Fiainana Mandrakizay